प्रयोग नभई बिद्यालय भवन भत्किन शुरु, के भन्छन् जग्गादाता ? « Salyan Today
प्रयोग नभई बिद्यालय भवन भत्किन शुरु, के भन्छन् जग्गादाता ?
प्रकाशित मिति : १९ पुष २०७६, शनिबार
सल्यान १९, पौष ।
सल्यानको एक बिद्यालय प्रयोग नभई भत्कन शुरु भएको छ । जिल्लाको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाको घाँजरीपिपल स्थित लेखसग्रहीमा रहेको कृष्ण माद्यामिक बिद्यालयको भवन प्रयोग नभई भत्कन शुरु भएको हो । साबिकको घाँजरीपिपल गाविसको बजेटबाट आर्थिक बर्ष २०६३।०६४ यो भवन निर्माण गरिएको थियो ।
रु.९ लाख २५ हजारको लागतमा निमार्ण भएको ६ कोठे बिद्यालय भवन स्थानान्तरण विवादका कारण प्रयोग नभए पछि भत्किएको छ । साविक घाँजरीपिपल गाविस वडा ७ बाट घाँजरीपिपलको वडा ५ मैदुपोखरीमा कृष्ण माद्यामिक बिद्यालय सार्ने निर्णय अनुसार ६ कोठे भवन निमार्ण गरिएको थियो । भवनको लागि जग्गादान गरेका समाजसेवी राम वहादुर वुढाका अनुसार विद्यालय मैदुपोखरीमा सार्ने भनेर सर्वपक्षिय र सर्वदलिय सहमति भए अनुसार आफुले निःशुल्क जग्गा दान गरेको वताउनुभयो ।
गाविसले वजेट विनियोजन गरि भवन निमार्ण गरेको उहाँको भनाई छ । विद्यालय सार्ने कुरामा नितिगत समस्या भएपछि भवनको केहि काम अधुरै रहेको थियो । भवन प्रयोग विहिन हुदाँ दिन प्रतिदिन जिर्ण वन्दै गएको छ । उक्त भवनका ५ वटा कोठाको जस्तापाता र काठ हावाले उडाएको छ । भवनको मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा स्थानीयको माग रहेको छ ।
अहिले नगर तथा वडाबाट वजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको स्थानीय जितवहादुर खड्काले वताउनुभयो । भवन प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने र मर्मतको लागि थप वजेट छुटयाउन जनप्रतिनिधीलाई प्रतिवर्ष आग्रह गरेपनि सम्वन्धित निकायले चासो नदिएको उहाँको भनाई छ । भवनको मर्मतसम्भार भएमा विद्यालय स्थान्तरण नभए पनि अन्य प्रयोजनमा काम लाग्ने स्थानीयको भनाई छ ।
भवन अभावमा रहेका हुलाक, वडा कार्यालय, कृषि, भेटेरीनरी समेत सञ्चान गर्न सकिने स्थानियका बताउछन् । यस भवनको पलाष्टर र रङ्घरोगन वाहेक अन्य सवै काम पुरा भएको थियो । भवन अभावमा रहेको ७ नम्बर वडाले समेत उक्त भवनलाई सुधार गरेर कार्यलय सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने स्थानियको सुझाव छ ।